Igumbi elizolileyo elinesibini elinegumbi lokuhlambela kwindlu yaseDorfstraße - I-Airbnb
Igumbi elizolileyo elinesibini elinegumbi lokuhlambela kwindlu yaseDorfstraße
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguTanja
UTanja unezimvo eziyi-47 zezinye iindawo.
Inikwe ngokulula amagumbi amabini aneshawari, indlu yangasese, iTV kunye neWiFi.
Ikhitshi elihlangeneyo lingasetyenziswa eHaus Dorfstraße (kunye nesitovu, imicrowave, umenzi wekofu, isitya). IHaus Dorfstraße lisebe leHotele-Restaurant Seeblick Engel, malunga neemitha ezingama-80 ukusuka ehotele nakwiLake Einfeld.
Malunga ne-200 m kude nechibi lokuhlambela i-Einfelder Bona,
Iibhayisekile, izikhephe ezinyovwayo, ii-SUB's zinokuqeshwa. Iparadesi yabathandi bendalo, abakhweli beebhayisikile nabakhenkethi. Indlu yecala kunye negumbi eliphindwe kabini limalunga neemitha ezingama-50 ukusuka kwi-Hotel-Restaurant Seeblick.
Indlu yeendwendwe "iDorfstraße" lisebe leHotele Seeblick Engel eMühbrook. Malunga nama-300m ukusuka kwindawo yokutyela yaseSeeblick kunye nechibi le-Einfeld. Jonga phambili kwibhayisekile emangalisayo kunye neendlela zokuhamba ezijikeleze i-Einfelder See, iBordesholmer See kunye neFlaschenmoor.
Ngesicelo, i-breakfast buffet okanye i-à la carte inokubhukishwa kwi-Hotel Seeblick. Izikhephe ezinyovwayo, amaphenyane, iibhayisekile kunye nee-SUBs nazo zinokuqeshwa eHotele Seeblick Engel.
Ngenxa yokuba kufutshane neHotele Seeblick, sihlala sikwindawo yeendwendwe zethu...
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mühbrook